onlineakhabar.com: हेर्नुहोस् भिडियो !! नेपालमै यस्तो डरलाग्दो परम्परा.. (Watch Video)
Amazing Video, Mustang News, Nepali News, Video, Viral Video » हेर्नुहोस् भिडियो !! नेपालमै यस्तो डरलाग्दो परम्परा.. (Watch Video)
हेर्नुहोस् भिडियो !! नेपालमै यस्तो डरलाग्दो परम्परा.. (Watch Video)
हरेक बर्ष झै यो बर्ष पनि मुस्ताङको कोवाङ गाविसस्थित बोक्सी खोलामा चौंरीको रगत पिउने मेला लागिरहेको छ । यस्तो लाग्छ उक्त मेला दैत्यहरुको मेला हो भन्ने जस्तो देखिन्छ किनभने सबैले हातमा गिलास समाउँदै चौरीको घाँटीमा प्वाल पारी रगत झिकि पिउनेहरुको लाइन देख्न सकिन्छ । यसरी पिइसकेपछि मुखभरि रातो रगतका टाटो देख्न सकिन्छ । जो कोहिलाई त्यो दृश्यहरु हेर्दा निकै दया लाग्न सक्छ ।
हाम्रो देशका हिमाली भागहरु जडिबुटीले भरिएको छ । धेरै प्रकारका जडिबुटीहरु हिमाली भेगमा पाउन सकिन्छ । त्यही जडीबुटीमा चरेको चौंरी गाईको रगत पिउनाले धेरै रोगहरु निको हुने बिश्वास छ जसका कारण यसरी यो समयमा चौंरीको रगत पिउने मेला लाग्ने गर्दछ । तर कतिपय डाक्टरहरु भने यस्तो गर्दा खासै कुनै रोग निको नहुने बरु अन्य संक्रमण हुन सक्ने साथै यसले पशुको अधिकारमा समेत प्रश्न चिन्ह उठाउने बताउँछन् ।
भिडियोको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Tags : Amazing Video Mustang News Nepali News Video Viral Video